Deblistering Machine sns-60N - China Halo Pharmatech Co., Ltd
Sns-60N dia patented fitaovana izay afaka mitranga capsules, takela-bato sy ny hafa haingana avy amin'ny blister Packs amin'ny extrusion. Io fitaovana manana tombony manokana noho ny haingam-pandeha, feno ny pilina-fandraisana, ary ny harmlessness ny pilina. Izany dia mahazatra fitaovana ho an'ny pilina-ilainy eny an-tsena. Fa karazana Aluminum Plastic Board (APB), sns-60N no fitaovana amin'ny rafitra mba hiatrehana hilefitra mora foana. Raha ampitahaina amin'ny hafa toy izany koa milina, sns andian-dahatsoratra no tsara indrindra pilina-milina fakàna orinasa mpamokatra entana ho an'ny orinasa lehibe fanafody, indrindra fa ny blister famokarana olana.
Sns-60N dia manasa-milina mandeha ho azy, tanana nanome sakafo sy 60 pcs / min toy ny hafainganam-pandeha ambony indrindra miasa. Tsy azo ampiharina ho an'ny saika isan-karazany ny blister fonosana.
Previous: Deblistering Machine sns-60A
Manaraka: Deblistering Machine sns-120A